Iminyaka eli-131 ukusukela ekuzalweni kombhali ongumFrentshi uFrançois Mauriac | Uncwadi lwangoku
Iminyaka eli-131 emva kokuzalwa kombhali ongumFrentshi uFrançois Mauriac
UAlex Martinez | | Ababhali
Ifoto nguFrançois Mauriac.
Ngomhla onje namhlanje kodwa ngo-1885, umbhali obalaseleyo wase-France u-François Mauriac wazalelwa e-Bordeaux. Ngale mini kubhiyozelwa iminyaka eli-131 yesi sikhumbuzo, ndicinga ukuba kufanelekile ukukhumbula kwindawo yam ethobekileyo ophumeleleyo kwiNobel Prize yoNcwadi ngo-1952.
Ubomi bukaMauriac buphawulwe, ngaphandle kwamathandabuzo, yeengxabano ezifana nemfazwe ezazihamba naye ubomi bakhe bonke. Mhlawumbi ukubandakanyeka kwakho ekuxhaseni iinjongo zakho yeyona ndlela yokuchaza ubuntu bakho.
Ngale ndlela "uthathe inxaxheba" kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala njengomqhubi we-ambulensi, wayebandakanyeka ekubhaleni exhasa urhulumente weRiphabhlikhi ngexesha leMfazwe yamakhaya yaseSpain kwaye wayeyinxalenye yempikiswano yaseFrance ngokuchasene nokuhlasela kweJamani ngexesha leMfazwe yesibini.
Kufuneka kuthiwe akazange athabathe inxaxheba kuwo nawuphi na umlo ngexesha leMfazwe Enkulu ukusukela oko wakhululwa ngenxa yokugula. Ithuba lasemva kwembambano yayilixesha lakhe elinesiqhamo kakhulu kwimveliso yoncwadi. ukuchwetheza: Ukwanga umntu oneqhenqa (1922) Uhlobo (1923), kunye Intlango yothando (1925)
Ngokubhekisele kwimbambano yaseSpain. Umbhali ongumFrentshi Wayeyinxalenye yeqela lase-Katolika lase-France elalikhethe ukulwa ne-fascism. Ubundilele obufunyenwe luluntu lwaseSpain ngeli xesha buye banamava nakwamanye amazwe, uMuriac ngomnye wabakhuseli abakhulu beRiphabhlikhi kumhlaba weGallic.
Wonke lo mzabalazo ubonakaliswe kwiimpapasho ezahlukeneyo kumaphephandaba figaro kuye y Uxinzelelo phi Uthathe inxaxheba ngokubonakalayo kwimibhalo yakhe ebalulekileyo ejolise kubuzwilakhe ezavela zadityaniswa eYurophu ngee-30s.
Ubukatolika kunye nokukholelwa kwakhe ngokuzimisela ziziphumo zobuntwana bakhe kusapho olugcinayo noluthanda kakhulu inkolo. Le mpembelelo yenkolo ngokungathandabuzekiyo yaphawula umsebenzi nobomi bakhe.
Ngaphandle kokholo olomeleleyo, uMauriac waziva iziseko zishukuma ngexesha ingxaki enzulu yothando awayifumanayo ngasekupheleni kweminyaka yoo-20. Ingxaki ebangelwe kukuthatheka kwesiFrentshi ngumbhali waseSwitzerland uBernard Barbey. Nangona kunjalo, ubuKatolika bakhe buvela kweli xesha linzima nelithandekayo.
Esinye sezona zinto zibalulekileyo zijonga ubudlelwane bukaMuriac kunye noGeneral De Gaulle. Muriac, umkhuseli oshushu womfanekiso ka-Gaulle, akazange athandabuze nangaliphi na ixesha ukukhusela nokunyusa inani lakhe ngamanqaku akhe kumaphephandaba. Uye waya kuthi de de Gaulle uyamdinga.
Emva kokukhululwa kweFrance ukuthatha inxaxheba kwezopolitiko kuye kwanda kakhulu ngenxa yakhe Ukuma kwesizathu se-Algeria ngexesha lempikiswano yobukoloniyali baseFrance kummandla waseMntla Afrika. Ngaphandle kokufumana izoyikiso ngesi sizathu, akazange athandabuze ukwenza umbono wakhe weziganeko uphumelele.
Indoda yeeleta oye wakoyisa ngamaxesha onke ukuthanda kwakhe ukutshintsha, ngokusekwe kwizimvo zakhe, ilizwe awayehlala kulo. Umlinganiswa onxulunyaniswe nexesha lakhe, kwimbali yenkulungwane yama-XNUMX.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Iminyaka eli-131 emva kokuzalwa kombhali ongumFrentshi uFrançois Mauriac
Iitekisi zoncwadi ezikhuthazayo
Iincwadi zikhukula iPlaza de España eSeville